၆၉နှစ်အရွယ် ဇနီးကို ပစ်ပြီး ၁၈နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးနဲ့ ပျော်ပါးလို့ သေဆုံးသွားတဲ့ အဖိုးအို – အောငျနိုငျသူ
၆၉နှစ်အရွယ် ဇနီးကို ပစ်ပြီး ၁၈နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးနဲ့ ပျော်ပါးလို့ သေဆုံးသွားတဲ့ အဖိုးအို
ဘရာဇီး နိုင်ငံသား Francinaldo Aparecido အမည်ရှိသော အသက် ၇၄နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုတစ်ယောက်ကတော့ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၂.၂သန်း တန် Mega ထီဆုကို ဆုခူးရရှိသွားခဲ့တာပါ။
သိုပေ့မယ့် သူ့ရဲ့ ကံကောင်းတဲ့အချိန်ကတော့ သိပ့်မကြာလိုက်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ၁၈နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ ပျော်ပါးနေတုန်း ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ။
Francinaldo ဟာ ဆုရပြီးတော့ တစ်ပတ်နီးပါးကြာပြီးနောက်မှာ အသက် ၆၉နှစ်အရွယ် သူ့ရဲ့ ဇနီးကို ကွာရှင်းဖို့ ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Mayra အမည်ရှိတဲ့ ၁၈နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းစခဲ့တာပါ။ Mayar ကည်း
Francinaldoအဖိုးအိုကို တကယ်ချစ်တာ ပါလို့ ဆိုပါတယ်နော်။. ဒါ့ကြောင့် သူ့အတွက် စပျစ်ဝိုင်ပုလင်းတွေ၊ ချောကလက်ဗူးတွေ နဲ့ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ မိမိရဲ့ အခန်းထဲမှာ Surprise လုပ်ခဲ့တာပါ။ နှစ်ဦးထဲ
အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့အချိန် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွေ့ဖက်ပြီးနှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ ကောင်မလေးဘက်ဟာ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ မရပ်မနား နမ်းတဲ့အရှိန်ကြောင့်ဘဲ သိပ့်မကြာခင်မှာဘဲ အဖိုးအိုဟာ ရုတ်တရက်သေဆုံးခဲ့တာပါ။
အသက်အရွယ်အရ စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်တဲ့အခါ အသက်ရှုမဝဖြစ်ပြီးတော့ ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်နော်။ Mayraဟာ ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးပြီး လူနာတင်ယာဉ်ခေါ်ပေမဲ့ အသက်ကယ်ဖို့ အချိန်မမှီလိုက်ပါဘူးတဲ့။
ရဲတွေရဲ့ အဆိုအရ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေစဉ်မှာ သူမရဲ့လျှာက ရေခူလိုမျိုး ဖြစ်ပုံရပါတယ်တဲ့။ ဒါ့ကို မထိန်းချုပ်နိုင် တဲ့အခါ တင်းကျပ်တဲ့ ပွေ့ဖက်မှုဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘဲသေဆုံးမှုဖြစ်သွားတယ်လို့
ဆိုပါတယ်နော်။Francinaldo ရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကိုတော့ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဇနီးနဲ့ကလေး ၁၄ယောက်မှာ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပြီးတော့ တရားဝင်လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ Mayra အတွက်တော့ ဘာအကျိုးခံစားခွင့်မှမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်နော်။credit
Unicode…၆၉နဈအရှယျ ဇနီးကို ပဈပွီး ၁၈နဈအရှယျ ကောငျမလေးနဲ့ ပြျောပါးလို့ သဆေုံးသှားတဲ့ အဖိုးအို
ဘရာဇီး နိုငျငံသား Francinaldo Aparecido အမညျရသော အသကျ ၇၄နဈအရှယျအဖိုးအိုတဈယောကျကတော့ ဟောငျကောငျဒျေါလာ ၁၂.၂သနျး တနျ Mega ထီဆုကို ဆုခူးရရသှားခဲ့တာပါ။
သိုပေ့မယျ့ သူ့ရဲ့ ကံကောငျးတဲ့အခြိနျကတော့ သိပျ့မကွာလိုကျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ၁၈နဈအရှယျ မိနျးကလေးတဈဦးနဲ့ ပြျောပါးနတေုနျး ရုတျတရကျကှယျလှနျသှားခဲ့တာပါ။
Francinaldo ဟာ ဆုရပွီးတော့ တဈပတျနီးပါးကွာပွီးနောကျမ အသကျ ၆၉နဈအရှယျ သူ့ရဲ့ ဇနီးကို ကှာရငျးဖို့ ဆုံးဖွဈခဲ့ပွီးတော့ Mayra အမညျရတဲ့ ၁၈နဈအရှယျကောငျမလေးနဲ့ ဇာတျလမျးစခဲ့တာပါ။ Mayar ကညျး
Francinaldoအဖိုးအိုကို တကယျခဈြတာ ပါလို့ ဆိုပါတယျနျော။. ဒါ့ကွောငျ့ သူ့အတှကျ စပဈြဝိုငျပုလငျးတှေ၊ ခြောကလကျဗူးတှေ နဲ့ ပွငျဆငျပွီးတော့ မိမိရဲ့ အခနျးထဲမ Surprise လုပျခဲ့တာပါ။ နဈဦးထဲ
အခနျးထဲမာ ရတဲ့အခြိနျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပှဖေ့ကျပွီးနတျခမျးခငျြး နမျးတဲ့အခြိနျမာတော့ ကောငျမလေးဘကျဟာ တငျးတငျးကပျြကပျြနဲ့ မရပျမနား နမျးတဲ့အရနျကွောငျ့ဘဲ သိပျ့မကွာခငျမာဘဲ အဖိုးအိုဟာ ရုတျတရကျသဆေုံးခဲ့တာပါ။
အသကျအရှယျအရ စိတျခံစားမပွငျးထနျတဲ့အခါ အသကျရမဝဖွဈပွီးတော့ ရုတျတရကျ သဆေုံးသှားတယျလို့ ဆိုပါတယျနျော။ Mayraဟာ ကွောကျလနျ့ထှကျပွေးပွီး လူနာတငျယာဉျချေါပမေဲ့ အသကျကယျဖို့ အခြိနျမမလိုကျပါဘူးတဲ့။
ရဲတှရေဲ့ အဆိုအရ နတျခမျးခငျြး နမျးနစေဉျမာ သူမရဲ့လာက ရခေူလိုမြိုး ဖွဈပုံရပါတယျတဲ့။ ဒါ့ကို မထိနျးခြုပျနိုငျ တဲ့အခါ တငျးကပျြတဲ့ ပှဖေ့ကျမဒဏျကို မခံနိုငျတော့ဘဲသဆေုံးမဖွဈသှားတယျလို့
ဆိုပါတယျနျော။Francinaldo ရဲ့ ပိုကျဆံတှကေိုတော့ ကနျြရနတေဲ့ ဇနီးနဲ့ကလေး ၁၄ယောကျမာ အကြိုးခံစားခှငျ့ရပွီးတော့ တရားဝငျလကျထပျထားခွငျးမရတဲ့ Mayra အတှကျတော့ ဘာအကြိုးခံစားခှငျ့မမဘူးလို့ ဆိုပါတယျနျော။credit